အကောင်းဆုံး Capsicum ဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Capsicum ဘဲလ် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ရာတွင်ပါဝင်နေတဲ့ professional စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ Capsicum ဘဲလ်။ ကျနော်တို့အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်မှုအမိန့်ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ကျနော်တို့ ပို. ပို. အတန်းမြင့်ထုတ်ကုန်များထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုဈေးအချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှယ်ယာပိုမိုချဲ့ထွင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသည့်အချိန်တွင်မဆို။
အနာဂတ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလမ်းပေါ်တွင်ကျနော်တို့ခါတိုင်းလိုကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့သုတေသန၏ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများကို ယူ. , အစဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့များ၏အရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်လာဖို့အသစ်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာကြမည်
ပုံစံ - JH-809G/JH-809R/JH-809Y
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၁.၄ အုပ်.
ဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:၈ ကီလိုဂရမ်
ငရုတ်ကောင်းပုံစံ–ချစ်စရာကောင်းတဲ့&ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစက်ဘီးအပိုတစ်ခုဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/capsicum-bell.html
အကောင်းဆုံး Capsicum ဘဲလ် ၀ ယ်ယူပါ။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ Capsicum ဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်း ၀ ယ်သူနှင့်ဖြန့်ချိသူရဲ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်ပါတယ်